Factory Architecture Fence - Mpanamboatra Fefy Architecture China
PVC mifono vy tariby harato horonan-taratasy ho an'ny indostrialy sy ny fambolena fampiharana
PVC mifono vy tariby harato koa dia karazana Weld tariby harato fefy fa fonosina amin'ny horonana noho ny savaivony tariby tariby. Izy io dia antsoina hoe fefy harato Holland harato, harato fefy Euro, Green PVC mifono sisin-tany fefy sisin-tany amin'ny faritra sasany.
Fefy boribory roa mifono vy mifamatotra harato fefy ho an'ny injeniera monisipaly
Fefy boribory boribory boribory roa dia antsoina koa hoe fehezam-bolan'ny tariby indroa, fefy zaridaina, fefy haingo. Izy io dia fefy mety tsara hiarovana ny fanananao ary toa tsara tarehy ihany koa. Ka dia nampiasaina tamin'ny fomba tsotra tamin'ny injenieran'ny Kaominaly, injenieran'ny maritrano.
358 Fiarovan'ny tariby avo lenta ho an'ny fampiharana fonja, fananganana tranokala fiarovana ny fananana
358 Fiarovana harato tariby avo lenta koa dia manondro fefy tariby fanoherana miakatra 358, harato miady fiakarana 358, fefy voaaro amin'ny fonja. Ampiasaina indrindra izy io amin'ny fefy fiarovana ny fonja, ny tafika ary ny sehatra hafa mitaky fefy fiarovana lehibe.
Fefy vy tariby miendrika L ho an'ny tranobe maritrano
Ny fefy tariby miendrika L dia matetika ampiasaina ho fefy aritrano, azonao atao izany manodidina ny trano fonenana, tranom-barotra, toeram-piantsonana. Izy io koa dia mivarotra fefy fiarovana amin'ny tsenan'ny APCA.